nei selenium uye cucumber isingafanirwe kushandiswa pamwechete
Kuru Kushandisa Michina Nei Selenium uye Cucumber Isingafanirwe Kushandiswa Pamwechete
Nei Selenium uye Cucumber Isingafanirwe Kushandiswa Pamwechete
Mune ino posvo, ini ndichatsanangura nei ndichifunga kuti rakaipa zano kunyora UI otomatiki bvunzo neSelenium neCucumber.
Musoro weiyo posvo unotaura Selenium uye Cucumber nekuti ndiwo anonyanya kufarirwa browser browser uye maturusi eBDD zvichiteerana, zvisinei, mamiriro echinyorwa chino anoshanda kune chero UI otomatiki chishandiso chakabatana nechero BDD chishandiso.
Ndisati ndachera zvakadzika, ngationgororei rumwe ruzivo rwemashure.
Chii chinonzi Selenium?
Selenium browser rekushandisa pakuongorora chishandiso icho chinokwanisa kudyidzana neHTML zvinhu zvewebhu application kutevedzera mushandisi chiitiko.
MuSelenium WebDriver, tinogona kunyora zvinyorwa mune dzinoverengeka mitauro yekuronga uye inogona kuve chinhu chakakosha kune akawanda OS uye kuyambuka-browser bvunzo.
Chii chinonzi Cucumber?
Cucumber yakasikwa kuti ityaire Behaeve Driven Development (BDD) maitiro, akadai kuti mutengi agone kutsanangura zvavanoda seyakateedzana yemienzaniso inonzi zviitiko, mumafaira akajeka emafaira vachishandisa mutauro weGherkin mune Yakapihwa Kana Ipapo fomati.
MuCucumber world, mafaera aya anonzi maficha maficha ayo anoongororwa nechikwata cheScrum kuti vanzwisise zvakajeka zvinodiwa usati watanga budiriro chaiyo.
Kamwe kusimudzira kuri kuenderera mberi, ivo vanogadzira uye / kana QA vanonyora Matanho eDanho ayo ari emhando pfupi makodhi ekodhi ayo anosunga zviitiko kubva kumafaira enzvimbo kuenda kune iyo bvunzo kodhi iyo inoita zviito zvinopesana nechishandiso chiri pasi pekuedzwa.
Selenium uye Cucumber
Ose Selenium uye Cucumber zvishandiso zvikuru zvezvinangwa zvavo asi kana zvashandiswa pamwechete, zvinhu hazviroore zvakanaka! Ngatione kuti sei.
Nhau dzinowanzo nyorwa kubva mumaonero emushandisi, semuenzaniso:
Feature: Login mashandiro
Sezvo mushandisi webhusaiti abc.com
Ini ndoda vatengi kuti vakwanise kupinda kusaiti
Zvekuti vagone kuona yavo account account.
Nekudaro, Maitiro mumafaira ezvinyorwa akanyorwa nenzira inotsanangura hunhu hwechinhu kana mushandisi achibatana ne kunyorera . Semuyenzaniso:
Muenzaniso 1: Yakakodzera kupinda
Kupa ini ndiri paabc.com Login peji
Kana ini ndaisa hunhu hunoshanda
Ipapo ini ndinodzorerwa kuAccount Yangu peji
Uye saka iwe unogona kuwedzera zvimwe zviitiko kuyedza akasiyana data musanganiswa.
Nekuti zvese zviri zviviri nyaya nefaira refaira rakanyorwa kubva padanho repamusoro-soro, uye nekuti isu tinoda kugadzirisa mamiriro ezvinhu, zvinongoita sezvakasikwa kutanga kunyora tsananguro dzedanho muCucumber iyo inodaidza Selenium kufambisa chikumbiro, ita zviito uye simbisa mhedzisiro.
Asi, apa ndipo panoitika dambudziko; patinotanga kusanganisa Selenium neCucumber kunyora automated UI bvunzo.
Mukurongeka kwese, mune yakapusa kesi senge iyo Login mamiriro ari pamusoro, zvinhu zvinowirirana zvakanaka pamwe uye nzira yacho inoita senge inonzwisisika, uye kutaura zvazviri, mizhinji mienzaniso yaunoona paInternet, inoratidza kushandiswa kweSelenium neCucumber, zvinoita kunge kuzvigumira ivo muenzaniso wakakurumbira weKupinda.
Vaverengi veaya mabloggi vangafungidzira kuti vanogona kutora iri nyore Login mamiriro uye voshandisa iwo iwo musimboti kune yakafara mamiriro echikumbiro.
Usanyengedzwe zvakadaro, sezvo zvinhu zvichikwanisa kuvavira kwazvo neSelenium neCucumber kana zvikaiswa kune chaiyo-yepasi hombe webhu-based application.
Ngatitorei muenzaniso wepeji yemhedzisiro yekutsvaga yeiyo e-commerce application inotengesa zvigadzirwa online. Kazhinji peji rekutsvaga rinenge rakazara nezvakadai, se mafirita, mhando, runyorwa rwezvigadzirwa, kugona kushandura kutsvaga, kugona kurapa kana auto-mutoro pakupururudza, nezvimwe, sezvinoonekwa mumufananidzo pazasi:
Ndiri kuenda kufunga kuti yega yega chimiro pane yekutsvaga mhinduro peji, yakawedzerwa kune iyo saiti pane inowedzeredza hwaro uchishandisa agile budiriro.
Kushandisa iwo iwo musimboti weyedu yakapusa Login muenzaniso, sezvo chimwe nechimwe chinhu chinogadziridzwa tichava neyakakodzera ficha faira izere nemazhinji akasiyana mamiriro. Semuyenzaniso:
Mune iteration 1 yekuvandudza, 'Sefa neMutengo' inogadzirwa, saka isu tichava nefaira refaira pairi nezviitiko zvayo zvine chekuita nemutengo wefaera.
Mune iteration 2 yebudiriro, 'Sefa neNyeredzi Kukoshesa' inogadzirwa, saka tinenge tine ficha refaira rayo nezviitiko zvayo zvine chekuita neyekuyera nyeredzi firita, uye zvichingodaro kune yega yega ficha.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti zvinoitika mune yega yega ficha faira zvinongonongedzera kune avo akasiyana maficha. Muchokwadi, ndosaka vachidaidzwa ficha mafaera nekuti tarisiro iri pa zvakasarudzika maficha .
Sezvambotaurwa, iko kushanda kuri nyore, tinogona kurarama kunetsekana nekugadzirisa zviitiko zviri paUI neSelenium neCucumber. Nekudaro, iko kushanda kuchikura uye nyowani maficha achiwedzerwa, kuomarara kunomuka sezvo panogona kuve nekutsamira pakati pezvakasiyana maficha.
Semuenzaniso, ini ndaigona kutanga kusefa zvandaitsvaga nemutengo ndozoshandisa imwe firita yeiyo nyeredzi chiyero. Ah… isu tava nedambudziko!
Ndeipi ficha faira inofanirwa kuitika iyi mamiriro? Mu 'Sefa ne Star Star' faira kana 'Sefa neMutengo' faira? Ko zvakadii kana ini ndikawedzera mamiriro ekushandisa mhando kune angu akacheneswa mhedzisiro kuti ndironge nemavhoti epamusoro?
Kana mubatiri achida kuona kuti yedu yekuvharidzira kufukidza chii, ndeapi emafaira maficha aanofanira kutarisa mukati? Achawana mufananidzo uzere wekuvharwa kwemamiriro ekuverenga nekuverenga imwe chete yefaira mafaera kana angave achifanirwa kuverenga ese maficha maficha?
Panguva yekusimudzira, kana chega chega chinhu chikagadziridzwa chimwe nechimwe mune imwe iteration, mafaera epamhepo anozotarisa pachinhu pachacho, saka pane imwe nguva, kana tiine zvakawanda maficha, tinofanirwa kutanga kufunga nezvekuyedza izvi, kwete kungozviparadzanisa chete asiwo zviitiko zvekugadzira patinosanganisa maficha akasiyana.
Uye zvirizvo, izvi ndizvo zvinozoitwa nevashandisi vekushandisa. Ivo vachatanga kupinda maitiro avo ekutsvaga, kamwe pane peji rekutsvaga, vangango paginate, vobva vasefa, vobva varongedza, vodzokera, zvichingodaro, uye vanogona kuita zviito izvi mune chero hurongwa. Hakuzovi neyakagadzwa marongero ezviitiko. Ichi chi rwendo chairwo rwevashandisi uye muyedzo chaiwo weiyo system!
Huzhinji hwetsikidzi mukushandisa hunoburitswa kana chimwe chinhu pachacho chiri ngoro kana kana zvinhu zviviri zvinoshanda mushe mushe, hazvishande pamwe chete. Izvi ndizvo zvinoenderana nePairwise Yekuyedza Model.
Saka, ndechipi chihombe chekushandisa Selenium neCucumber pamwechete?
Pese pazvinogoneka, isu hatifanire kushandisa iyo webhu GUI yekusimbisa inoshanda. Iko kushanda kwechimwe chinhu kunofanirwa kuyedzwa pane iyo API rukoko nemayedzo ekubatanidza.
UI inofanirwa kungo chengeterwa kutarisa mushandisi inoyerera kuburikidza nechishandiso, kana kumagumo-kumagumo bvunzo uye kuve nechokwadi chakakodzera chinotarisirwa mamamojuru kana mawijeti aripo pane peji semushandisi achifamba kubva kune rimwe peji kuenda kune rimwe.
Rwendo rwevashandisi rwunosanganisira:
1 - Enda kune peji reimba yeabc.com webhusaiti
2 - Tsvaga chigadzirwa kubva papeji rekutanga
3 - Bhurawuza kuburikidza neye runyorwa rwekutsvaga mhinduro
4 - Isa sefa uye / kana kurongedza
5 - Verenga chigadzirwa ruzivo
6 - Wedzera chigadzirwa kubhasikiti
7 - Enderera kuongorora…
Selenium yakanaka mukugadzirisa zviitiko izvi uye kutarisa zvinhu zvakasiyana pane peji rega rega uye sezvandambotaura pamusoro, ndizvo zvatinofanira kutarisa patinoyedza paUI rukoko, uye kuyedza matunhu akasiyana shanduko.
Sezvinoonekwa, rwendo rwumwe nerumwe rwevashandisi kuburikidza nechishandiso runobata pamapeji akawanda uye zvingangoita zvinowirirana nezvinhu zvakawanda pane peji rega rega, uye tinenge tichiongorora zvinhu zvakasiyana padanho rega parwendo, saka tichishandisa ficha faira kunyora zviitiko izvi hazviite zvachose, nekuti hatisi kuyedza chimiro, tiri kuyedza iyo yakasanganiswa system.
Zvinhu zvinonyatso enda-zvakaumbwa-peya isu patinoedza kunyora ekupedzisira-kumagumo mamiriro mune Yakapihwa-Rini-Ipapo fomati. Mangani maGiven atichava nawo? Tichava namaTshi mangani?
Mumwe anogona kutaura kuti kumagumo-kusvika-kumagumo bvunzo isu tinogona kungoshandisa Selenium pachayo pasina iyo Cucumber uye tove neakasiyana otomatiki bvunzo kune yega yega chinhu uchishandisa Selenium uye Cucumber. Zvekare, ini handikurudzire iyi nzira sezvo iwe uchizogona kunge uine zvakapetwa bvunzo uye isu tinoziva kuti inononoka uye kupwanya UI bvunzo, saka isu tinofanirwa kuvavarira kuva nezvishoma zvacho kwete zvakanyanya! Zvakare, iwe uchazofanira kubata nechero hunhu bvunzo.
Cucumber chishandiso chakakura mukutarisa hunhu hwechinhu pane API dura pamwe nemiedzo yekubatanidza iyo yega yega ficha inogona kunyatso kuyedzwa. Ichi chishandiso chinofanirwa kushandiswa kuKuedzwa Kwenyaya.
Selenium chishandiso chakakura chekugadzirisa zviitiko zvevashandisi paUI rukoko uye kutarisa maitiro ehurongwa hwakazara, inosanganisira nyaya zhinji dzevashandisi.
Kana tasvika kuSystem Integration Testing kana UI Kuedza, zvakanakisa kushandisa Selenium isina hwaro hweCucumber senge kuyedza kunyora maCucumber maficha maficha enzendo dzevashandisi, inogona kunetsa uye isingashande chinangwa icho chishandiso chakavakirwa.
Chinyorwa changu chakavakirwa pakubvisa chokwadi!
Kana paine chero kukosha mukushandisa cucumber, iri padanho rehunhu.
Kuongorora mashandiro echinhu kunonyanya kuitwa kunze kweUI, i.e. API bvunzo.
Kunyangwe pa API bvunzo bvunzo, cucumber inokundikana zvinosiririsa.
UI Miedzo inofanirwa kufukidza mushandisi / bhizinesi zviitiko uye kwete imwechete maficha.
Cucumber inoshanda zvakaomarara neyakareruka uye isina ruzivo rwekuyedza bvunzo nezviitiko, senge munhu wese anofarira kupinda kwekuita.
Tichifunga kuti ini ndiri papeji rekupinda
Ipapo ndinofanira kuona account yangu
Asi chero muchengeti we savvy anoziva kuti kunyangwe iko kuri nyore kwekupinda mukati kune akawanda macheki. Edza kushandura iwo macheki mumucucumber.
Izvi ndezve kungopinda chete; edza kunyora bvunzo-yekupedzisira kumagumo!
UI bvunzo dzinofanirwa kunge dziri kuvhara mushandisi nzendo idzo dzinowanzo kuve magumo-kusvika-kumagumo uye kurovedza akawanda maficha echishandiso.
Pane zvakawanda zvinoenderera mune imwe mushandisi rwendo kuyambuka iko kunyorera.
Cucumber zvirokwazvo HASI chishandiso chakakodzera chevashandisi / bhizinesi mamiriro ekuyedzwa.
iphone 6s kuwedzera vs lg g4
Android maapplication anoramba achirovera? Mhinduro iyi yakabatsira vazhinji kugadzirisa dambudziko
Apple iPhone SE mutengo, zuva rekuburitsa uye kuwanikwa kwenyika
Maitiro ekuparadzanisa yako Apple Watch ne iPhone yako nyowani
Obama anga aine 'Berry uye Selectra Edge; Trump anoshandisa maviri eApple iPhone nhare